Ixesha lasehlotyeni - Galveston County Food Bank
admin Juni 30, 2021 0 Comment
Igama ihlobo lithetha izinto ezahlukeneyo kubantu abohlukeneyo.
Kubantwana ihlobo may kuthetha ukudlala ngaphandle kwemini yonke, ukuya epakini okanye elunxwemeni, ukudlala kwisitshizi, ukwenza ipikniki nokwenza iikhowuni zekhephu.
Njengomzali ehlotyeni kunokuthetha into eyahlukileyo ngokupheleleyo. Njengoko amaqondo obushushu eqala ukunyuka, ngokunjalo namaxhala kunye neenkxalabo. Kungathetha ukuba isibhakabhaka siphezulu ngeendleko zombane, iindleko zamanzi eziphezulu, imirhumo eyongezelelweyo yokhathalelo lwemini kunye namatyala amaninzi asekhaya. Kwezinye iintsapho, ukufikelela ekutyeni kunokuthetha umahluko phakathi kwehlobo elonwabileyo nehlobo elilambileyo.
Ixesha lasehlotyeni akufanele libe ngamaxesha alambileyo, kodwa malunga ne-50,000 abahlali baseGalveston County benza ubunzima bokungakhuseleki kokutya.
Unokunceda uqiniseke ukuba usapho aluhambi ngaphandle kwesidlo. Umrhumo omncinci njenge- $ 1 unokubonelela ngokutya oku-4.
egqithileyo ngeposi Previous: Ukujonga ngasemva ngu-20/20
Okulandelayo elilandelayo: Dibana neNavy Resource Navigator